Maraykanka oo doonaya inuu Al-Shabaab kula dagaallamo Waqooyi-Bari Kenya - Jigjiga Online
HomeSomalidaMaraykanka oo doonaya inuu Al-Shabaab kula dagaallamo Waqooyi-Bari Kenya
Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa codsaday ogolaansho ah in uu qaadi karo duqeymo ka dhan ah dagaallamayaasha Al Shabaab ee ka howlgala qeybo ka mid ah Gobolka Waqooyi Bariga ee Kenya, sida uu baahiyay wargeyska New York Times oo soo xigtay saraakiil Amerikaan ah.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in codsigaas uu sii xoojiyey weerar ay Al-Shabab ku qaadeen saldhig militari oo ku yaal gobolka xeebta ee Lamu, bishii Jannaayo, halkaas oo lagu dilay saddex askari oo Mareykan ah.
Al-Shabab waxay waaggaas sheegtay in Maraykanka ay jabiyeen.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa muujiyay in aysan ogoleyn in diyaaradaha drone-ka ee Mareykanka ay duqeyn ka fuliyaan qeybo ka mid ah gobolkaas.
Sida ku qoran New York Times, koroneel Christopher P. Karns, oo ah afhayeenka guud ee taliska, ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo codsigaas.
“Taliska AFRICOM waxay aqoonsanayaan baahida loo qabo in la adeegsado cadaadis caalami ah oo joogta ah oo ka dhan ah Al Shabaab, si loola socdo dhaqdhaqaaqooda, jiritaankooda, loogana hortago fiditaankooda,” ayuu yiri Colonel Christopher oo la hadlay wargeyska.
Wuxuu intaa raaciyay in tallaabooyinkaas “ay noqon karaan kuwo leh qaabab kala duwan”.
Qorshaha ku aadan suurtagalnimada ah in duqeymo cirka la fuliya waxaa ka mid ah in militariga Mareykanka loo ogolaado in uu weeraro dhanka cirka ah ka geysan karo deegaannada qaar ee ka tirsan Bariga Kenya, sida Gaarisa iyo Laamu oo xudduud la leh saldhigga militari ee Manday Bay oo ku yaalla xeebta una dhaw xadka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya.
Dowladda Kenya ilaa hadda kama aanay hadal codsiga ku aadan in Mareykanka uu duqeymo ka dhan ah Al Shabaab uu ka fuliyo gudaha dalkeeda.
Aragtida shacabka Gobolka Waqooyi Bari
Bilow Aadan Keerow oo ah sannatarkii hore ee Mandheera ayaa BBC-da u sheegay in ay ka soo horjeedaan in codsiga ah in Mareykanka uu duqeymo ka fuliyo Waqooyi Bari, “maadama ay dhibaato ka dhalan karto”.
“Anigu waxaan aaminsahay in dhibaato badan ay inoo keeni doonto waana ka soo horjeedaa runti,i tallaabo aad u foolxun bey noqoneysaa”
Wuxuu sidoo kale sheegay in ay taageersan yihiin howlgallada ka dhan Al Shabaab isla markaana aanay suuragal aheyn in gobolka ay diyaaradaha Mareykanka duqeymo ka fuliyaan.
“Iyadoo la dagaalanka argagixisada aan taageersanahay, waddanka dhibaato farabadan ayay argagixisada u keentay laakiin suuragal ma ahan mana haboona, waxayna sababi kartaa dhibaato badan oo ay si gaar ah u gaarsiineyso gobolka Waqooyi Bari”.
Bilow Keerow wuxuu sidoo kale sheegay in wax natiijo aanay soo kordhin doonin balse dowladda looga baahan yahay tallaabooyin kale oo lagu xallinayo amni darrada.
“Dowladda haddey rabto in ay la dagaalanto argagixisada, tallaabooyin badan ayay qaadi kartaa sida in ay xoojiso amniga xudduudaha. Soomaaliyaa ayuu muddo sanado ah ka wadaa, drones-kana wuxuu kula dagaallaa argagixisada maalin walba waana tan ballaaratay, marka uma arko in natiijo ay keeni karto,” ayuu yiri.
Al Shabaab ayaa horey weeraro uga geysatay gudaha Kenya, waxaana gobolka ka socdaa howlgallo lagula dagaalamayo ururkan.
Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa muddooyinkii dambe sare u qaaday weerarrada xagga cirka ah ee ay ku bartilmaameedaadaan fariisimaha kooxda Al Shabaab ay ku leeyihiin Soomaaliya.
Bishii April ee sannadkan, Ciidamada Maraykanka waxay qirteen in dad rayid ah ay waxyeello ka soo gaartay duqeymo dhinaca cirka oo ay isla bishaas ka fuliyeen Soomaaliya.